Die Entrückungslehre | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
Ny "fivoaran'ny fampakarana" naroson'ny Kristiana sasany dia mifampiresaka izay mitranga amin'ny fiangonana rehefa miverina i Jesosy - rehefa tonga ny "fahatongavan'ny faharoa", araka ny niantsoana azy matetika. Ny fampianarana dia milaza fa ny mpino dia miaina karazana fiakarana kely; “hifindra” mankany amin'i Kristy izy ireo, amin'ny fotoana sasany rehefa hiverina amin'ny voninahitra izy. Ny tena marina, ny mpino ny fampakarana dia manompo ho toy ny andalana tokana:
1 Tesaloniana 4,15:17 -:
«Fa izao no lazainay aminao amin'ny tenin'ny Tompo: fa isika izay velona ka mitoetra mandra-pahatongan'ny Tompo dia tsy handresy ireo efa nodi-mandry. Fa izy tenany, ny Tompo, rehefa re ny baiko, rehefa miakatra ny feon'ny arkanjely sy ny anjomara andriamanitra dia hidina avy any an-danitra, ary hatsangana amin'ny maty izay maty ao amin'i Kristy. Aorian'izany dia isika izay mitoetra sy hijanona dia ho entin'ny tafakatra avy eny amin'ny rahona eny amin'ny rivotra mankany amin'ny Tompo; ary hiaraka amin'ny Tompo foana isika. »
Ny fampakarana dia toa miverina any amin'ny lehilahy iray antsoina hoe John Nelson Darby tamin'ny 1830. Nozarainy amina fizarana roa ny ora hahatongavan ny faharoa. Voalohany, alohan'ny fahoriana, Kristy hamonjy ny olony masina («Ny fampakarana»); aorian'ny fahoriana dia hiaraka amin'izy ireo izy, ary tao anatin'izany ihany no nahitan'i Darby ny fiverenan'ny tena marina, ny "fiavian'i Kristy faharoa" amin'ny famirapiratana sy voninahitra. Ny mpino ny fampakarana dia samy manana ny fijeriny ny fotoana rehefa miatrika ny "fahoriana lehibe" ny fampakarana. (Fahoriana) hitranga: alohan'ny, mandritra na aorian'ny fahoriana (Talohan'ny, afovoany sy aorian'ny fahoriana). Misy ihany koa ny hevitry ny vitsy an'isa, dia ny olom-boafidy voafidy ao anatin'ny Fiangonana Kristiana ihany no tratra tamin'ny fiandohan'ny fahoriana.
Ahoana ny sehatra iraisam-pirenena fahasoavana (GCI / WKG) hanaovana fampakarana?
Rehefa mijery ny 1 Tesaloniana 4,15: 17 isika dia toa milaza fotsiny ny apostoly Paoly fa rehefa miantso ny "trompetraan'Andriamanitra" dia ny maty izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha hiakatra miaraka amin'ireo mpino izay mbola velona ny rahona eny amin'ny rivotra, mankany amin'ny Tompo ». Tsy misy ny fanontaniana ny fiangonana manontolo - na ampahany amin'ny fiangonana - izay nasandratra talohan'izay, nandritra na aorian'ny fahoriana na nifindra tany amin'ny toeran-kafa.
Toa milaza zavatra mitovitovy amin'izany ny Matio 24,29: 31. Ao amin'ny Matio dia nilaza i Jesoa fa ny olomasina dia tafangona "avy hatrany fa aorian'ny fahoriana tamin'izany fotoana izany". Ny fitsanganana amin'ny maty, ny fanangonana na, raha tianao, ny "fampakarana" dia atao am-boninahitra amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Avy amin'ireto soratra masina ireto ny fahasamihafana nataon'ny solontena fotopampianaran'ny fampakarana dia sarotra takarina. Noho izany antony izany, ny Fiangonana dia maneho ny fandikana ny tanjona ny andinin-teny voalaza etsy ambony ary tsy misy fiakarana manokana. Ireo andinin-tsoratra izay voaresaka ireo dia milaza fotsiny fa hitsangana ny olomasina maty ary hiray hina amin'ireo izay mbola velona rehefa hiverina i Jesosy amin'ny voninahitra.
Ny fanontaniana momba izay hitranga amin'ny fiangonana taloha, mandritra ary aorian'ny fiverenan'i Jesosy dia mijanona misokatra hatrany amin'ny Soratra Masina. Amin'ny lafiny iray, isika dia manana antoka momba izay lazain'ny Soratra Masina amin'ny fomba mazava sy dogmatika: hiverina amin'ny voninahitra i Jesosy hitsara an'izao tontolo izao. Ireo izay nijanona ho marina taminy dia hatsangana amin'ny maty ary hiara-hiaina aminy amin'ny fifaliana sy voninahitra mandrakizay.